How'd it happen and more reports?: ၂၀၃၅ခုနှစ်မှာ စီးရတော့မဲ့ မဟာမြိုတော်ဟောင်းရန်ကုန်ရဲ့ ခေတ်မှီမြို့ပတ်ရထားစီမံကိန်း!
၂၀၃၅ခုနှစ်မှာ စီးရတော့မဲ့ မဟာမြိုတော်ဟောင်းရန်ကုန်ရဲ့ ခေတ်မှီမြို့ပတ်ရထားစီမံကိန်း!
၂၀၃၅ ခုနှစ်မှာ အပြီးအစီး ရန်ကုန် မြို့ပတ်ရထား အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အခု ဒီနှစ်ထဲမှာ တင်ဒါလေးတွေ ခေါ်နေပါပြီ၊
နောက်ထက် အနှစ် ၂၀ လောက်ဆိုစီးရတော့မယ်လို့ မျော်လင့်ရတာပါ...အဲဒီအချိန်ဆို...
ဒါပေမဲ့ အခုထိတော့ လျှပ်စစ်မီးတောင်ကောင်းကောင်းမပေးနုိုင်သေးဘူး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်လို့မရ ဘူးလေ....အများပြည်သုတွေကတော့ အိမ်မက်ကလေးလိုမျော်လင့်တော့တနေတုန်းဘဲ.....
” စီမံကိန်းလုပ်ရမယ် [...] ဂျပန်၊နော်ဝေတို့ကိုစသည်ဖြင့် ကမ်းလှမ်းထားတယ်၊ ပြောဆိုဆွေးနွေးဆဲ အဆင့်ဘဲရှိသေးတယ်။
Yangon Subway စီမံကိန်းရှိသည်ဟု မြန်မာ့မီးရထားမှတာဝန်ရှိသူများ ပြောကြာထားပါသည်။ ဒီ Fan Page မြန်မာ့ မီးရထားနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ၊ ရန်ကုန်မြို့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆိုင်သောသတင်းများ နိုင်ငံတကာမှတကာမှာ Subway များအကြောင်း၊ Yangon Subway နှင့်ပတ်သက်သော စိတ်ကူးယှဉ်မှုများအကြောင်း စသည်တို့ကို အလင်းသင့် သလိုတင်ပြသွားပါမယ်။
Whenablackout happens, people underground will be in trouble. :)
မီးပျက်သွားမှဖြင့် မြေအောက်မှာ ဒုက္ခရောက်နေပါအုံးမယ်...
ရန်ကုန်မီးရထားလမ်း အသစ်အတွက် အားရစရာပါ အခုမှာတင်ဒါခေါ်လို့ကောင်းတုန်းဘဲဗျ....
2. Solari Di Udine Spa
5. Kajima Corporation
6. The First Branch of the International Construction Engineering Company
8. (a)Daiwa House Industry Co. ,Ltd.; (b)Fujita Corporation Shoichi Inoue
9. Uptron Pte., Ltd.
10. (a)Yunnan Construction Engineering Group Co., Ltd.; (b) Mega Resources Co.,Ltd.
11. (a) Active Business Consolidation Servieces Co., Ltd.;
12. (a) Bloomsky Co., Ltd. ;
14. ITOCHU Corporation
15. Shwe Taung Development Co.,Ltd.
17. (a) Meinhardt (Singapore) ;
18. (a) Bright Ruby Resources Pte Limited ;
20. (a) Fortune International Ltd.;
21. (a) Glorious Myanmar Co., Ltd;
22. (a) Glorious Myanmar Co., Ltd.;
23. Win & Win Co., Ltd.
24. (a) Dawn (Ah Yone Oo) Construction Co., Ltd. ;
28. (a) Shwe Than Lwin Group of Company ;
Layout Plan 1 Layout Plan2Layout Plan3Layout Plan4Layout Plan 5
Layout Plan 8 Layout Plan7Layout Plan 8 Layout Plan9Yangon City Station
Yangon City Station Surrounding Area Surrounding Area Future Image of YCS Future Image of YCS
Future Image of YCS Future Image of YCS Future Image of YCS Future Image of YCS Route to First Floor
Route to First Floor Route to First Floor Route to First Floor First Floor Sample 1 First Floor Sample 2
Second Floor Sample Route to Third Floor Route to Third Floor Third Floor Sample New Station Sample
၂၀၃၅ခုနှစ် ရန်ကုန်အတွက် ဂျပန်က ရေးဆွဲတင်ပြထားပေးတဲ့ ရထားလိုင်း ပုံစံအသစ်လေးပါ ၊ ဖြစ်လာ မဖြစ်တော့ အစိုးရကလူထုတွေအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာကို စောင့်ကြည့်လိုက်ကျပါနော်....
2035 Yangon Transportation plans by JICA
Labels: ခရီးသွား, အထူးသတင်း